Soo dejisan AutoHotkey 1.1.24.05 – Vessoft
Soo dejisan AutoHotkey
AutoHotkey – software ah oo loogu talagalay in lagu astaysto hotkeys ku saabsan qalabka talooyin kala duwan. AutoHotkey waa awoodaa inuu booska ka beddel ugu of furayaasha iyo fursado ay ku keyboard, mouse, gamepad iyo manipulators kale ku xiran kombiyuutarka. software The leedahay luqad gaar ah script in u saamaxaaya in ay qori wax qabnay u ahayn ujeeddooyinka wax ka duwan. AutoHotkey kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan wax macros by gacanta ama la isticmaalayo duubayaasha Dhaqale.
Beddelidda furayaasha iyo fursado ay
Taageerada manipulators kala duwan
Abuur macros by gacanta
AutoHotkey Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Minecraft 1.11
English, Français, Español, Deutsch... Uplay 28.1.0.5103
English, Українська, 中文, Русский... EaseUS MobiSaver 7 Free iyo Pro
SketchUp Make 17.1.174 2017 iyo 16.1.1450 2016
العربية, English, Français, Español... Bitcoin 0.13.2